इथियोपियन ड्राइभरले हाँस्यो र भन्यो 'तिम्रो मुलुक त अझै गरिव राष्ट्रको सुचिमा छ है?'
कसैले नेपाल सगरमाथाको देश, सीताको जन्मभूमि, गोर्खालीको मूलुक, संसारको नै राम्रो र सुन्दर ठाँउ भन्दा हामी नेपाली घमण्डले गमक्क पर्छौ। कुरा त्यस्तै ३/४ वर्ष अघिको हो, म काम सकेर कोठा फर्कदै थिए ट्याक्सीमा।
प्राय ट्याक्सीमा हुदा मलाई राजनीतिक, सामाजिक कुरा गर्नुको छुट्टै मज्जा लाग्छ १ त्यो दिन पनि त्यस्तै भयो। कुरै कुराको सिलसिलामा मेरो इथियोपियन ट्याक्सी ड्राइभरले मलाई सोध्यो तपाई कुन देशबाट हो? मैले उही गर्व र दम्भको साथ जवाफ फर्काए 'नेपाल'। ड्राइभर एक छिन शान्त भयो, केहि बोलेन, अनि एक्कासी हास्यो र भन्यो 'तिम्रो मुलुक त अझै गरिव राष्ट्रको सुचिमा छ है?'
आफ्नो देशको बारेमा सधै राम्रो सुनिरहेको म त्यो कटु सत्य भनौ वा वास्तविक यथार्थ कुरा सुनेर झल्यास्स भए। एकफेर त झनक्क रिस पनि उठ्यो, किन जान्ने पल्टनु पर्यो उसलाई भनेर।
'हो त है हामी गरिब राष्ट्रको सुचीमा साच्चै पुछार मै पो छौँ नी।'
एक्कासी याद आयो तितो सत्य अनि एकै छिन सोँचे र लाग्यो २/३ वर्ष बिदेश बस्दैमा मैले आफ्नै धरातल विर्सिएछु। राजधानी काठमाडौँ, ठूलो शहर जनकपुरको ओहोर दोहोरमा आफ्नै वरिपरिको सिराहा, सप्तरी, रोल्पा, रुकुमको वास्तविकता विर्सेछु। आवेशमा त्यतीबेला झनक्क रिस उठे पनि त्यो ट्याक्सी ड्राइभर संगको गफले मलाई आफ्नै समाज हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण दियो। मलाई मेरो वास्तविकताको बोध गराईदियो।
आजकाल म कोड फर नेपालमा आबद्द छु्र म लगायत अरु केहि साथीहरु नेपालमा डिजिटल साक्षरता बढाउने काम गर्छौ्र हाम्रो सानै समूह छ तर ठूलो सपना र योजनाहरु हामीसंग छन। केहि महिना अगाडी हामीले नेपालमा खुला डाटाको प्रयोग वढाउने अभिप्रायले नेपाल म्याप भन्ने वेभसाइट सुरु गरेका छौँ।
वेभसाइटमा नेपालको सवै गाँउविकास समिति, नगरपालिका, जिल्लाको तथ्याङ्क र जानकारी राखिएको छ। सवै डाटाहरु ग्राफमा, चार्टमा हेर्न सकिन्छ र हरेक जिल्लाको जानकारीहरुलाई तुलना गर्न सकिन्छ। वेभसाइट चलाउन सारै सजिलो छ।
आजकल नेपाल म्याप विस्तार गर्ने क्रममा मेरो धेरै समय साइटमा रहेको डाटा हेर्न र केलाउनमा नै वित्छ। भन्नै पर्दा, मलाई यो कामले आफ्नै देश बुझ्न सहयोग गरेको छ तर, साथ साथै दुःखको कुरा जति नेपाल सम्बन्धि डाटा हेर्छु,देशको कुरा बुझ्छु उति नै आफ्नो नेपालको स्थिती देखेर औडाहा लागेर आउछ।
सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालका ५ वर्ष उमेर मुनीका बालबालिकाहरुमा १०० जना मध्ये ४० जना कुपोषित छन्र नेपाली महिलाहरु मध्ये ४० प्रतिशतलाई लेख्न पढ्न अझै आउदैन। नेपालका ६४ प्रतिशत मानिसहरु अझै दाउरामा खाना बनाउछन भने ८० प्रतिशत नेपालीको घरमा अझै विजुली पुग्न सकेको छैन।
४० प्रतिशत नेपाली अझै खुला आकास मुनी नै दिसा पिसाब गर्न बाध्य छन, घरमा शौचालय नभएकोले। यी त पुरा देशको सरदर प्रतिशत मात्र हो। जिल्ला, गाँउ विकास समिति, नगरपालिकाको तहमा गएर अझै हेर्ने हो भने कतिपए ठाँउका स्थिती अझै विकराल छ।
खोटाङ जिल्लाको दिकुहाको ८६ प्रतिशत जनताको घरमा चर्पी छैन, विजुली पुगेको छैन अनि महोत्तरीको धमौरा गाँउका ६० प्रतिशत जनतालाई पढ्न लेख्न आउदैन। धमौराको कुल जनसंख्याको जम्मा ८ प्रतिशतले मात्र एस एल सी पास गरेका छन। यी गाँउहरुले नेपालको विकासको सुस्त गति देखाउछ। हाम्रो नेपाल छिट्टै विकसित हुन्छ, संसारकै राम्रो देश छिट्टै हुन्छ भनेर गमक्क परिरहदा धेरै नेपाली मानब विकासको लागि चाहिने आधारभुत आवश्यकताको परिधिभन्दा पनि टाडा रहेका छन।
हामीले नेपाललाई विकशित, सम्बृद्द बनाउने योजना बनाइ रहदा के हामी गाँउ गाँउमा बस्ने औसत नेपालीको आधारभूत आवश्यकता त विर्सिरहेका छैनौँ। पूर्व पश्चिम चल्ने बुलेट ट्रेनको आवश्यकता महशुस गरिरहदा हरेक नेपालीको घरमा चर्पीको अनिवार्यता र उपयोगिताको कुरा गर्न विर्सिरहेको त छैनौँ। शैक्षिक स्थिती राम्रो बनाउन एस एल सि प्रवेशिका र जोड २ परिवर्तन गरिरहदा सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने न्यून आय भएको नेपालीका छोरा छोरीलाई पोषण युक्त खानेकुरा दिन विर्सिसकेका छौ।
नेपाल म्यापमा विभिन्न जिल्ला, गाँउ विकास समितीको तथ्याङ्क हेर्दा मलाई त्यस्तै कुराले औडाहा बनाउछ। देशलाई अगाडी लाने दौडमा आफ्नो देशको 'साच्ची' कै धरातल विर्सिरहेको त छैनौ नि। घर बनाउदा होस् या समाज बनाउदा सम्बृद्द समाजको लागि तलैदेखि जग बलियो बनाउनु पर्छ तर विकासको दौडमा गुटुटु दौडिने प्रयास गरिरहदा हाम्रो प्राथमिकता तत्कालको लागि गलत ठाँउमा परेको त छैन?
औडाहाको उकुस मुकुस आफैमा कहाली लाग्दो हुन्छ. मन मुटु भुत भुताउने खालको हुन्छ तर कहिले काँही त्यहि औडाहाले समस्याको नयाँ तथा नविन बाटो पनि खोज्छ। त्यहि औडाहाले बास्तविक जीन्दगीको परिधि र लचकताको सिमा देखाउछ।
नेपालको सवै समस्याको समाधान आजको भोली नहोला। सवै जिल्ला, गाँउविकास समितिमा मोटरगाडी, नयाँ स्वस्थ्य चौकी तत्काल नपुग्ला। कति योजना खर्चिला होलान, हाम्रो नेपालको आर्थिक हैसियत भन्दा बाहिरको, यसो देश विदेशबाट दुइचार पैसा जम्मा गरेर बनाउ भन्दा नि नमिल्ने खालको र गरिब देशको गरिबसरकार संग सवै कुरामा मुख ताकिहाल्ने स्थिती पनि छैन। तर यि सवै बाधिएको परिधि भित्र चाँदीको घेरा नभएको भने होइन।
सवै ठूलो समस्याको समाधान गर्ने सामथ्र्य अहिले नभए पनि कतिपय सानो तर महत्वपुर्ण समस्याको समाधान हामी आफै युवाहरु नै गर्न सक्ने स्थितिमा भने हामी छौँ है! उदाहरणको लागि बाल विवाह सम्बन्धि जन चेतना, घर घरमा चर्पिको निर्माण र त्यस्को आवश्यकता बारेमा सम्बाद छलफलहरु व्यापक रुपमा उठाई जनचेतना फैलाउने काम गर्न सकिन्छ।
आजकाल त यस्तो जनचेतना फैलाउन सामाजिक सञ्जालहरुले पनि महत्वपूणै भुमिका खेलेको छ। विजुली, मट्टितेल, दाउराको विकल्पको रुपमा सौर्य प्यानल प्रयोग गर्ने, शुद्द पानीबारेमा जनचेतना फैलाउने, स्थानीय सरकारी विद्यालयमा स्वयंमसेवक भएर काम गर्ने। यी काम हेर्दा र सुन्दा सरल एवं सानो देखिएला तर यी समस्याबाट समाजमा पर्ने प्रभाव ठूलो छ। मिलेर काम गरेकोको खण्डमा यी समस्या बाट छुटकारा पाउन धेरै दिन लाग्ने पनि छैन।
हामी सबै गाँउटोल नगरका युवाहरु मिलेर समस्या समाधान गर्न सानो सानो समूह बनाएर अग्रसर हुने हो भने यस्ता सामाजिक काम र अठोटले एउटा लहर श्रृजना गर्नेछ। हामी सवैले एकै काममा हात हाल्नु पछै भन्ने पनि छैन। आफुलाई मन परेको वा महत्वपुर्ण लागेको एउटा अभियान सुरु गर्दा भो।
ल साथीहरु, नया अभियान सुरु गर्नुहोस, २/४ जना मन मिल्ने र कुरा मिल्ने साथीहरु समूह बनाएर आजै काम सुरु गरौँ र विकासको लागि अब सरकार कुर्नु पर्ने बेला गयो। एक पल्ट नेपाल म्यापमा गएर आफ्नो गाँउ, सहर, जिल्लाको सहि स्थिती बुझ्नुहोस।
तपाईलाई पनि आफ्नो ठाउँको स्थिति देखेर औडाहा लाग्यो भने वा यो सामाजिक समस्याको समाधान ननिकाली छोडदिन्न भन्ने इच्छा जाग्यो भने अरु साथीसंग कुरा बहस गरेर नया अभियान सुरु गर्नुहोस। हाम्रो पिढी एक अर्कालाइ परेको बेला सहयोग गर्न, राम्रो कुरामा संयमित भएर सम्बाद गर्न र समस्याको उचित र समयानुकुल समाधान खोज्न तयार छ।
प्रखर लेखिका मार्गरेट मियीद भन्छिन, 'सानो तर कटिबद्द मान्छेहरुको समूहले काम गरेर संसार बदल्छु भन्दा उनीहरुको कामको प्रति कहिल्यै औला नउठाउनुहोस, त्यस्तै मान्छेको जमातले नै आज सम्म संसार बदलेका छन।' ति सानो र कटिबद्द साहसी जनता हामी नेपाली हुन सक्छौ। हामी सधै गरिबी र दरिद्र हुने छैनौ, हामी उठ्ने छौ।
फोटो: लोन्ली प्लानेट
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १, २०७४, ०१:०५:४८